AirAttack 2 yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
AirAttack 2 yemahara kwenguva shoma
Zvakare nhasi tinokuunzira mutsva wekurwa nendege mutambo, mune yayo yechipiri vhezheni. Airattack 2 ndiyo yechipiri vhezheni yechinyakare AirAttack, mu chizvarwa chitsva chemumhepo chinorwira ndege jets ine inoshamisa 3D mifananidzo uye zvinoshamisa orchestral soundtrack. Airattack inowanikwa kurodha pasi zvachose mahara kwenguva yakati rebei, saka usatora nguva yakareba kushandisa mukana uyu.
AirAttack 2 inotibvumidza kunakidzwa 22 anoyevedza mazinga atinozo fanirwa kudzivirira vese vavengi kuti tinosangana mumamishini akasiyana atinosangana nawo padanho rega rega. Zviitiko zvese zvakagadzirwa muhukuru hwe3 kupa hukuru hwechokwadi hwechokwadi kumutambo. Uye zvakare, iyo ruzha inotibvumidza isu kuti tipinde mumutambo senge mune zvekare arcade michina.
Kunakidzwa AirAttack 2 mutambo unotipa inosvika mashanu ndege dzakasiyana dzatinogona kusarudza. Zvombo zvendiza dzakasiyana zvinogona kukwidziridzwa kuwedzera simba rakakura rekuparadza. Uye zvakare, isu tinogona zvakare kutaura neshamwari dzedu kuburikidza neyekushandisa chat uye kuwiriranisa kufambira mberi kuburikidza neMitambo Center kuitira kuti tishandise akasiyana madhivhisi kunakidzwa nemutambo uyu.
1 Inosanganisira AirAttack 2
2 AirAttack 2 ruzivo
Inosanganisira AirAttack 2
22 anoyevedza mazinga ane hombe nhamba yemamishinari padanho rega.
3D nharaunda yatinogona kuparadza.
Rwiyo rwakaumbwa nemimhanzi makumi matatu.
Mazuva ese uye evhiki mibayiro.
Tinogona kusarudza ndege shanu dzemumwe mutambi.
Zvombo zvinogona kukwidziridzwa, kubva kumoto wemoto, mabhomba, lasers, maroketi ...
Zvinoshamisa mhedzisiro uye kuputika.
Tinogona kutaura neshamwari dzedu kuburikidza nekushandisa.
Inoenderana ne Game Center iyo inotibvumidza kuyananisa mitambo yedu nezvose zvishandiso.
AirAttack 2 ruzivo
Kugadziridza kwekupedzisira: 05-12-2015
Saizi: 334 MB
Rated kwemakore 9 zvichikwira
Kugarisana: Inoda iOS 8.0 kana gare gare. Inoenderana ne iPhone, iPad uye iPod touch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » AirAttack 2 yemahara kwenguva shoma
Ini handinzwisise xk iyi mhando yeapp haibudi yeapuro tv inova iyo kwaunogona kuwana zvakawanda kubva mairi, nguva pfupi yadarika iyo  tv yakanganwika.
MuATV mune vhezheni (yekutanga yandinofunga iri) uye inobhadharwa ... zvinonyadzisa.
Google inovandudza mashandisiro ayo achiwedzera rutsigiro rwe AMP